Hiran State - News: Breaking News: Shirkada Xawaalada Amaana Express oo lag ayaabo iney musalafto kadib markii qaar ka mid ah hantiilayaasha shirkada go,aansadeen iney gooyni u sameystaan magac kale.
Breaking News: Shirkada Xawaalada Amaana Express oo lag ayaabo iney musalafto kadib markii qaar ka mid ah hantiilayaasha shirkada go,aansadeen iney gooyni u sameystaan magac kale.
Breaking News: Shirkada Xawaalada Amaana Express oo laga yaabo iney musalafto kadib markii qaar ka mid ah hantiilayaasha shirkada go,aansadeen iney gooyni u sameystaan magac kale.
Waxaa ka taagan hogaanka sare ee shirakda Xawaalada Amana Express oo ah shirkadaha uguwaaweyn xawaaladaha ka howl gala Somaliya kana mid ah shirkadaha magacooda la maqlay waxii ka danbeyey dagaladii sokeeye kadib ayaa warar hoose oo ka so baxaya masuuliyiinta shirkada ugusareysa sheegayaan in qaar ka mid ah ganacsatadii shirkada aas aasay ay qorsheynayaan iney gooyni u sameystaan shirkad cusub halka kuwo kalena doonayaniney sii heystan magaca hada jira ee Amaana Express.
Qilaafka ugu weyn ayaa yimid qaar ka mid ah milkiilayaasha shirkada oo ahaa kuwo daacad ah wax badan kala socon in shirkadu qaar shaqaalaheeda amaba raga hantida ku leh ay qeyb ka ahaayeen mushkiladii Hiiraan ka dhacday Jun .18/1999 xiligasi oo lagu xasuuqay bartamaha magaalada Belet weyn dad kor u dhaafayo 100 qofood oo masuulkii xiligaasi ka ariminayey Hiiraan ay shirkadu markii uu waxkasta ku dheelay soo dhoofiyeen Hiiraana ay noqotay goob ay maamulaan kooxo aan la aqoon ilaa maanta.
Muranka ugu weyn ayaa yimid kadib markii leys weydiiyey cida ka danbeysay Gudoomiyahii midawga maxaakiimta gobolka Hiiraan oo ay Viso dal ku gal ah u sameeyeen qaar ka mid ah raga hantida ugu badan ku leh shirkada gaar ahaan xafiiska Nairobi.waxeyna arintii aaqirkii ku so aruurtay iney wax ka ogaayeen dhamaan rag ay qaraabo yahiin ninka isagu fiisaha loo sameyey.
Arintaan waxaa ka dhashay muran badan waxaa sidoo kale ka dhashay kala shaaki dhinaca hanitida shirkada taalo oo Software-ka ay shirkadu ku shaqeyso hada u muuqda mid u gacan galidoona kooxda dooneysa iney sii isticmaalaan magaca Amaana kooxdaasi oo ah kuwii wadanka kenya keenay gudoomiyahii midowga maxaakiimta gobolka Hiiraan.
Qilaafkaan oo hada soo xoogeystay ayaa waxaa la sheegayaa in hadii uu sii socdo ay ku xoolo beeli doonaan shacab badan oo reer Hiiraan ah oo ay shirkadu u tahay bank.hadiise murankaan si socdo yaa ku hanti beelayo? waxaa si toos ah iyo sidadbanba ugu xoolo beelayo dadka Shareholders ah amaba shirada dhaqaalo u taalo amaba dhigtay ee aan iyagu waxna diidi karin waxna ogolaan karin.
Xafiisyada qaarkood ee shirada Amaana ku leeyahay dunida dacaladeeda waxaa laga sheegayaa in hadii ay kuu taalo lacag dhan amaba ka badan 10 kun ay adag tahay in hada lagu siiyo hal mar hadaad codsato oo laguu yar yareynayo, waayo shiradu waxey inta badan kushaqeysaa lacagaha la dhigto ogolansho iyo ogolansho la,aan, waa nidaamka ay u shaqeeyaan Xawaaladaha guud ee ay Somalidu leeyahiin.
· admin on November 10 2011 16:08:10 · 0 Comments · 3426 Reads ·
14,579,332 unique visits